သတင်း - သင်နှစ်သက်ရာ ဖယောင်းတိုင်များပေါ်တွင် ဥမင်လှိုင်ခေါင်းကို ပြုပြင်နည်း
ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ခင် ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းတူးခြင်းသည် တကယ့်ပြဿနာဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပေါက်နေပုံရတဲ့ ဖယောင်းတိုင်အချို့ဟာ မီးတောင်ပေါက်တွေကနေ အမှန်တကယ်ခံစားရပါတယ်။
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော ဖယောင်းတိုင်သည် အမှန်တကယ် မီးတောင်ဝတွင် ပြဿနာများရှိသည်။
ပြဿနာ နှစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါတွင် CRATERS မှဖြစ်ပြီး TUNNELING မဟုတ်ပါ။
l မီးစာသည် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း လျင်မြန်စွာ လိုဏ်ခေါင်းပေါက်သည်။
l အရည်ပျော်ဧရိယာ၏အချင်း (အကျယ်) သည် အလွန်သေးငယ်သည်။
ထိုသို့ဖြစ်လျှင် သင့်ဖယောင်းတိုင်ကို ပြုပြင်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော "ပြင်းထန်သော ဥမင်တူးခြင်း" အဆင့်များကို အသုံးပြုပါ။
ဥမင်တူးခြင်းသည် တကယ့်ပြဿနာဖြစ်သောအခါ၊ ဥမင်လှိုင်ခေါင်း၏ ခက်ခဲမှုနှင့် ပြင်းထန်မှုတို့အရ ၎င်းကို ဖြေရှင်းရန် အောက်ပါနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
လှိုဏ်ခေါင်းရုံသာ - ဖယောင်းတိုင်ကို အချိန်အကြာကြီး မီးရှို့ပါ။
အကယ်၍ ဖယောင်းတိုင်သည် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမျှသာ ဖြစ်နေပါက၊ သင်သည် ဖယောင်းတိုင်ကို လောင်ကျွမ်းရန် အချိန်အလုံအလောက်ပေးလျှင် ၎င်းသည် သူ့အလိုလို ပြုပြင်နိုင်သည်။
သီအိုရီအရ၊ ကောင်းစွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဖယောင်းတိုင်သည် နောက်ဆုံးတွင် အရည်ပျော်သွားမည် သို့မဟုတ် ဘေးဘက်ရှိ ဖယောင်းအားလုံးကို “သန့်ရှင်း” စေမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ဖယောင်းတိုင်သည် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖောက်ခြင်း၏ နိမိတ်လက္ခဏာအနည်းငယ်ကို ပြသသောအခါ၊ ၎င်းကို လောင်ကျွမ်းစေခြင်း ရှိမရှိကို သိရန် အချိန်ကြာမြင့်စွာ လောင်ကျွမ်းစေရုံဖြင့် ထိုက်တန်ပါသည်။
ကိုးကွယ်ရာ? ဖယောင်းတိုင်ကို ၃-၄ နာရီ အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ် မီးရှို့ပါ။
အဲဒါက မကူညီဘူးဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့်ကို ဆက်သွားပါ။
ပုံမှန်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း- အစွန်းတစ်ဝိုက်တွင် ထုပ်ပိုးထားသော ဘူးခွံများထည့်ကာ နာရီအနည်းငယ်ကြာအောင် လောင်ကျွမ်းပါစေ။
သင့်ဖယောင်းတိုင်သည် အရွယ်အစားမှန်ကန်သော မီးစာပါသော်လည်း သင်က ၎င်းကို မလောင်ကျွမ်းနိုင်လောက်အောင် ကြာသွားသောကြောင့် ၎င်းကို နောက်ထပ်ရွှေ့ရန် အချိန်တန်ပြီ… တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသော ပြင်းထန်သော လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက အင်တာနက်သည် သွပ်ပြားအနည်းငယ်နှင့် အချိန်ပိုလိုအပ်သည့် ဖယောင်းတိုင်လိုဏ်ခေါင်းများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်ဟက်ခ်တစ်ခုကို တင်ဆက်ခဲ့သည်။
သီအိုရီအရ၊ သင်သည် ဖယောင်းတိုင်၏ "စင်" ကို အပူရှိန်ဖြင့် ဖယောင်းတိုင်မှ အရည်ပျော်သွားအောင် ထုပ်ပိုးထားသည့် အိုးမှအစား ဖယောင်းသို့ ပြန်ညွှန်းပေးခြင်းဖြင့် ပြုတ်သွားနိုင်သည်။
ဖယောင်းတိုင်ကို မထွန်းခင် ၁/၄ လက်မ အမြင့်မှ မှိုများကို ဖယ်ရှားရန် မီးစာအား ဖြတ်တောက်ပါ။
ဖယောင်းတိုင်ထိပ်ကို သံဘူး (အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား) ဖြင့် ဖုံးအုပ်ပါ။
ထိပ်ပေါ်တွင် အကြမ်းဖျင်း 1 လက်မကျယ်သော အပေါက်တစ်ခု သို့မဟုတ် ဖယောင်းစင်အထက်တွင် သေးငယ်သော ခဲတုံးကို ဖြတ်ပါ။
ဖယောင်းတိုင်ကို ဂရုတစိုက်ထွန်းပြီး ၃-၄ နာရီကြာ လောင်ကျွမ်းစေပါ။
မီးလောင်ပြီးသည်နှင့်၊ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းသည် ယခင်ထက် သေးငယ်နေသင့်သည်။
ဖယောင်းတိုင်ကို လုံးဝပြန်ယူရန် ဤအရာကို အကြိမ်အနည်းငယ် ထပ်လုပ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
တနည်းအားဖြင့် သင်သည် ထိပ်မှထွက်ရန် ဖယောင်းတိုင်၏မျက်နှာပြင်ကို အပူသေနတ်ဖြင့် အရည်ပျော်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် tinfoil မလိုအပ်ဘဲ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။
အားနည်းချက်? လူအများစုတွင် အပူသေနတ် မရှိပါ။
အကယ်၍ သင်သည် သံဘူး သို့မဟုတ် အပူသေနတ်ကို အသုံးပြုပြီး ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကို ဆက်သွားပါက သို့မဟုတ် မီးစာကို ဖုံးအုပ်ထားပါက နောက်ရွေးချယ်မှုသို့ ဆက်သွားပါ။
ပြင်းထန်သော ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း- မီးစာအစားထိုးခြင်း။
အကယ်၍ သင့်မီးစာအား ဖယောင်းဖြင့် မျိုချမိပါက သို့မဟုတ် ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းသည် အစောပိုင်းနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ပြုပြင်မရနိုင်လောက်အောင် မြင့်မားနေပါက၊ သင်၏ တစ်ခုတည်းသော ရွေးချယ်ခွင့်မှာ မီးစာကို လုံးဝ အစားထိုးရန် ဖြစ်သည်။
ဤခွဲစိတ်မှုသည် ဖယောင်းတိုင် ခွဲစိတ်မှုကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး ပျက်ကွက်နိုင်ခြေရှိသည်။ အခြားရွေးချယ်စရာမှာ ဖြုန်းတီးနေသော ဖယောင်းတိုင်ဖြစ်သောကြောင့် များသောအားဖြင့် အန္တရာယ်နှင့်ထိုက်တန်ပါသည်။
မစတင်မီ အောက်ပါတို့ကို စုဆောင်းပါ။
l Oven (သို့မဟုတ် ပြထားသည့်အတိုင်း အပူပေးသေနတ်)။
l Apple ထောင့်
သင့်ဖယောင်းတိုင်အတွက် မှန်ကန်သောအရွယ်အစားဖြစ်မည်ဟု အာမခံချက်မရှိသော်လည်း သင့်ဒေသရှိ ဝါသနာစတိုးဆိုင်မှ မီးစာများကို များသောအားဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ Apple corers တွေက ရှာရလွယ်ပါတယ်။ ကုန်စုံဆိုင်တော်တော်များများက သယ်သွားကြတယ်။
1. ပန်းသီးထောင့်ကို ဖယောင်းတစ်ဝိုက်တွင် ပွတ်ပေးပါ။
2. ပန်းသီး ထောင့်ကို ကျစ်ပြီး ဖယောင်း ပလပ်ပေါက် ထွက်လာသည်အထိ အပေါ်ကို ဂရုတစိုက် ဆွဲထုတ်ပါ။
ပန်းသီးထောင့်ကို မီးစာတစ်ဝိုက်တွင် လှည့်ပတ်ပါ၊ ဖယောင်းပလပ်ကို ဖယ်ရှားပါ၊ မီးစာသည် ဖယောင်းတိုင်အိုး၏အောက်ခြေတွင် ကပ်နေပါက၊ ချောင်းဆိုးဆေးပြားနှင့် wick ကို ဆွဲထုတ်ရန် အပ်နှာခေါင်းပလာယာကို အသုံးပြုပါ။ အမှိုက်ဟောင်းကို လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။ ဖယောင်းကို တတ်နိုင်သမျှ သိမ်းထားပါ၊
3. ဖယောင်းကို ဖယောင်းတိုင်၏ အလွတ်နေရာတွင် ပြန်ထည့်ပါ။
ကျန်ရှိသော ဖယောင်းကို လွှင့်ပစ်ပါ။
ဖယောင်းကို ဖယောင်းတိုင်၏ အလွတ်နေရာတွင် ပြန်ထည့်ပါ။
ပြီးပြည့်စုံခြင်းအတွက် စိတ်မပူပါနှင့် - မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သင်သည် ဖယောင်းအားလုံးကို နောက်တစ်ကြိမ် အရည်ပျော်သွားတော့မည်ဖြစ်သည်။
4. အပူသေနတ်ဖြင့် ဖယောင်းတိုင်၏ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး အရည်ပျော်ပြီး ပြားသွားသည်အထိ အရည်ပျော်ပါ။
ဖယောင်းအရည်ပျော်ရန် အပူသေနတ် သို့မဟုတ် မီးဖိုကို အသုံးပြုပါ။
ဖယောင်းအရည်ပျော်နေစေရန် အပူသေနတ်ကို အသုံးပြုပါ။
အပေါ်ဆုံးအလွှာက အရည်တွေကျလာတဲ့အထိ ဖယောင်းကို အရည်ပျော်ပါ။
တနည်းအားဖြင့် ဖယောင်းတိုင်၏ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး အရည်ထွက်ပြီး ပြားသွားသည်အထိ (များသောအားဖြင့် 200°F သို့မဟုတ် 93°C ခန့်) မီးဖိုတွင် ကွန်တိန်နာကို နိမ့်သောနေရာတွင် ထားပါ။
5. မျက်နှာပြင် ခြောက်သွေ့သွားပြီးနောက် အစားထိုး မီးစာအတွက် အပေါက်တစ်ခု ပြုလုပ်ရန် သွားကြားထိုးတံ သို့မဟုတ် တံကျင်တံကို အသုံးပြုပါ။
မီးစာရှည်လွန်းလျှင် wick tab ကိုဖြတ်ပစ်ရပေမည်။
မီးစာအသစ်သည် ရှည်လွန်းပါက ဖယောင်းတိုင်တွင် မီးစာအသစ်တစ်ခုကို ထည့်ပါ။
မီးစာနှင့် ဖယောင်းကြား ကွာဟချက်အတွက် စိတ်မပူပါနှင့်။ ဖယောင်းတိုင်ကို ပြန်လည်ထွန်းညှိပြီးနောက် ဧရိယာများကို ဖယောင်းအရည်ဖြင့် ချက်ချင်းပြန်ဖြည့်ပေးသည်။
သင့်အစားထိုးမီးဖိုတွင် တက်ဘ်တစ်ခုမရှိပါက၊ ဖယောင်းတိုင်သည် ၎င်း၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါတွင် နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းသည် ထိပ်တိုက်တွေ့နိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းသည် ဖယောင်းတိုင်၏သက်တမ်းအတွက် အချိန်များစွာမယူပါ၊ သို့သော် ဖယောင်းတိုင်ကို ထပ်မလောင်တော့ခြင်းထက် ပိုကောင်းပါသည်။